Umbuzo: Ingabe Umjikelezo Owodwa We-Testosterone Uzokulimaza - BikeHike
Kuthatha isikhathi esingakanani ukululama emjikelezweni we-testosterone?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-testosterone steroids ingene?
Kufanele ngilinde isikhathi esingakanani phakathi kwemijikelezo?
Kwenzekani lapho ngiyeka ukuthatha i-testosterone?
Ingabe i-TRT ifinyeza ukuphila kwakho?
Yisiphi isikhathi esingcono kakhulu sosuku sokujova i-testosterone?
Ingabe i-testosterone i-steroid?
Ingabe ukukhipha isidoda kukwenza ube buthakathaka?
Yiziphi izinzuzo zokungashayi indlwabu?
Iyini imiphumela emibi ye-testosterone eningi?
Ingabe amaphilisi e-testosterone mabi?
Ingabe abantu abane-testosterone ephezulu baphila isikhathi eside?
Ingabe kuhle ukuthi indoda ithathe i-testosterone?
Mingaki iminyaka ongayihlala ku-TRT?
Ingabe i-1 ml ye-testosterone iningi?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi isibhamu se-testosterone siqale ukusebenza?
Ungakwazi yini ukweqisa izidakamizwa ze-testosterone?
Iyiphi i-steroid enamandla kakhulu?
Iyiphi i-steroid engcono kakhulu ye-mass?
Ungakwazi ukujova i-testosterone emabholeni akho?
Ingabe ama-booster e-testosterone aphephile?
Cishe wonke amadoda abe nokugxila kwe-testosterone kubuyela esimweni esijwayelekile ezinyangeni ezintathu ngemuva kokuphela komjikelezo, kanye no-100% ngezinyanga ezingu-12, ngaphandle kokuthi banomsebenzi ojwayelekile we-gonadal ekuqaleni kocwaningo.
Imiphumela. Imithelela ezithakazelweni zocansi ibonakala ngemva kwamaviki angu-3 ekhuphuka emavikini angu-6, kungekho okunye okukhulayo okulindelekile ngale kwalokho. Izinguquko zokuqhanyelwa/ukuqhanyelwa zingadinga kufikela ezinyangeni eziyisi-6. Imithelela kukhwalithi yempilo ibonakala phakathi kwamaviki angu-3–4, kodwa izinzuzo ezinkulu zithatha isikhathi eside.
Isikhala Phakathi Kwemijikelezo Lokho kusho ukulinda cishe amasonto ama-4 kuya kwangu-6 ngemva kokudluliselwa kombungu kanye nokuhlolwa kokukhulelwa okungenayo i-negative ukuze kuqale omunye umjikelezo ogcwele kwabesifazane abaningi. Ukwenza lokhu izikhathi ezimbalwa zilandelana kubhekiselwa kukho njengokubuyela emuva emijikelezweni ye-IVF. Uma imijikelezo ihlukene kakhulu, ingabizwa ngokuthi ibambezelekile.
Uma usebenzise i-testosterone eningi, ukuyeka umuthi kungase kubangele izimpawu zokuhoxa ezingemnandi, njengokucindezeleka, ukukhathala, ukucasuka, ukuphelelwa ukudla, izinkinga zokulala, noma ukuncipha kwe-libido.
Izinkinga zenhliziyo nemithambo yegazi ezihlobene ne-TRT ziye zacaciswa ucwaningo lwakamuva olubonisa ukuthi ukwelapha okuhlobene nokwenyuka okucacile kwamazinga e-serum testosterone ebangeni elijwayelekile kuhlotshaniswa nokuncipha kokufa kwezimbangela.
Ngokwesiko, kusekuseni. Akudingekile ngokwesayensi ukujova i-testosterone ekuseni, nakuba i-testosterone yethu isezingeni eliphezulu kakhulu ekuseni.
I-Anabolic steroids Ihomoni enkulu ye-anabolic steroid ekhiqizwa umzimba wakho i-testosterone. I-Testosterone inemiphumela emibili eyinhloko emzimbeni wakho: Imiphumela ye-Anabolic ikhuthaza ukwakhiwa kwemisipha. Imiphumela ye-Androgenic inesibopho sezici zesilisa, njengezinwele zobuso kanye nezwi elijulile.
Ingabe Ukushaya Indlwabu Kudala Ubuthakathaka? CHA, Ukushaya indlwabu akubangeli ubuthakathaka. I-hormone ye-prolactin ikhishwa ngesikhathi sokushaya indlwabu futhi njengesifundo ngasinye I-Prolactin ingaba nomthelela ebuthongweni, ngaleyo ndlela ikwenze uzizwe ukhathele futhi wozela. Okujabulisayo, abantu abaningi baze bashaye indlwabu ukuze babasize balale futhi banciphise ukucindezeleka.
Ukuyeka ukukhipha isidoda izinsuku ezimbalwa kungase kwandise i-testosterone futhi kuthuthukise ikhwalithi yesidoda. Kodwa-ke, alukho ucwaningo olusekela ezinye izimangalo ezihlobene nokushaya indlwabu. Ochwepheshe abaningi bayavuma ukuthi ukushaya indlwabu kuyingxenye enempilo nebalulekile yokukhula okuvamile kobulili.
Amadoda anamazinga e-testosterone aphezulu kakhulu angase ahlangabezane: nezinduna. ukuziphatha okunolaka noma okubeka engcupheni. izinwele zomzimba eziningi. ikhanda. izinkinga zenhliziyo noma zesibindi. high blood pressure (hypertension) high sex drive (libido) anda isifiso sokudla.
LWESITHATHU, Oct. 26, 2016 (HealthDay News) — I-testosterone eyengeziwe kanye nama-anabolic-androgenic steroids (AAS) ahlobene angabangela ukuhlaselwa yinhliziyo, izinguquko zobuntu kanye nokungazali, futhi ahlukunyezwe kalula, i-US Food and Drug Administration iyaxwayisa.
Uthi amazinga aphezulu e-testosterone ahambisana nokuphila isikhathi eside nokuthi abantu abaphila isikhathi eside banamazinga angcono e-hormone.
I-Testosterone inesibopho sokwanda kwemisipha. Isisindo somzimba esithambile sisiza ukulawula isisindo futhi sikhulise amandla. Kwabesilisa abane-testosterone ephansi, ucwaningo lubonisa ukuthi ukwelashwa kunganciphisa isisindo samafutha futhi kwandise ubukhulu bemisipha namandla.
Ngokuvamile, ukwelashwa kwe-testosterone kuwukwelashwa okuqhubekayo okuqhubekayo isikhathi eside, uma kungenjalo ingunaphakade. Njengezimo eziningi ezingapheli, ukuyeka ukwelashwa kungabona izimpawu zakho zibuya njengoba amazinga e-testosterone ephinda ehla ngaphansi kwamazinga anempilo.
1 ml ngesonto 200 mg ngesonto testosterone. Lona umthamo wokubuyisela ongaboniswa ukwandisa isisindo somzimba ngokuphawulekayo esikhathini esifushane. Kodwa-ke, ukusebenzisa imithamo ephezulu kungase kukhulise ukukhiqizwa kwamangqamuzana egazi abomvu kanye ne-viscosity yegazi, ngakho-ke udokotela wakho udinga ukuqapha amazinga akho egazi le-hematocrit.
Ingabe Ukwelashwa Kwe-Testosterone Ephansi Kuzoqala Nini Ukusebenza? Emadodeni anikezwe i-testosterone replacement therapy, ngokuvamile kuthatha izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha ukusebenza, kusho uFarooq. “Amanye amadoda angabona ubungcono ngokushesha, kodwa kwabesilisa abaningi wuhlelo oluhamba kancane,” kusho uFarooq.
Shayela udokotela wakho ukuze uthole imiyalelo uma uphuthelwa i-aphoyintimenti yomjovo wakho we-testosterone. Njengoba lo muthi unikezwa uchwepheshe wezokunakekelwa kwempilo endaweni yezokwelapha, ukweqisa kwezidakamizwa mancane amathuba okuthi kwenzeke.
I-Testogen empeleni iyi-booster ye-testosterone, futhi iqukethe inqwaba yezithako ezinamandla, okwenza kube okuhlukile, okungokwemvelo, futhi okuphephile kuma-steroids. Ama-anabolic steroids wangempela ngokuvamile ayizinhlobo ezahlukene ze-testosterone, ngakho-ke kunengqondo ukuthi i-testosterone booster izokusiza ukwakha imisipha.
Kunezinhlobo ezingaphezu kwe-100 ze-anabolic steroids. I-androgen enamandla kakhulu i-testosterone (ebizwa ngokuthi: tests-TOSS-tuh-rone). Nakuba i-testosterone ngokuyinhloko iyihomoni yabesilisa evuthiwe, imizimba yamantombazane ikhiqiza amanani amancane.
Trenbolone futhi Dianabol; I-Dianabol iyi-steroid yokuzikhethela kubantu abafuna ukwakha imisipha engathi sína ngesikhathi esifushane. Le steroid yaziwa ngamandla ayo, futhi ukuyifaka esitakini sakho kanye ne-testosterone kungaqinisa umjikelezo wakho wokubhuqa.
Uma kunqunywe efomini likakhilimu ngenhlanganisela eyisisekelo efanelekile, i-testosterone ye-transdermal ingasetshenziswa ku-scrotum. Isikhumba se-Scrotal sincane futhi sinokufinyelela okuphezulu kwe-steroid. Kubaluleke kakhulu ukugwema ukusebenzisa ukhilimu noma ijeli enotshwala njengoba utshwala buyingozi empilweni ye-scrotal isikhumba.
Ingabe izithako ze-testosterone ziphephile? Amanye ama-booster e-OTC testosterone angase aphephe uma esetshenziswa ngokusesilinganisweni, kodwa awakwazi ukuphakamisa unomphela noma ukugcina amazinga akho e-testosterone. Zonke izinhlobo ze-OTC testosterone booster zinikeza izingozi zazo zezempilo eziyingqayizivele.
Umbuzo: Umjikelezo We-testosterone Omude Kangakanani
Indlela Yokujikeleza I-Testosterone
Umbuzo: Iyiphi i-Testosterone ephansi
Yini Yehlisa I-Testosterone
Impendulo Esheshayo: Ungakwazi yini Ukuhamba Nge-Testosterone
Umbuzo: Uyijikeleza kanjani i-Testosterone
Impendulo esheshayo: May Bike
Umbuzo: Yiziphi Ukudla Okuphansi kwe-Testosterone
Impendulo Esheshayo: Yikuphi Ukudla Okwehlisa I-Testosterone